Vana Vasati Vabva Zera Vopihwa Here Zvokudzivirira Nhumbu?
Vamwe vana vasati vabvazera vanoti havasi kufara nedanho rehurumende rekuti vasapihwe zvekudzivirira kubata pamuviri vasati vasvika makore ekuita zvepabonde pasina mvumo yevabereki.
Hurumende iri kutsika madziro panyaya iyi kunyangwe dare reparamende riri kuti mutemo uvandudzwe kuti vana ava vakwanise kuzvidzivirira kana voita zvepabonde.
Izvi zviri kuuya pangua iyo hurumende yakazivisa kuti mumwedzi waNdira naKukadzi chete, vana vasati vabva zera zviuru zvishanu vainge vabatira pamuviri uye vamwe chiuru chimwe chete nemazana masere vainge varoorwa vasati vavzazera.
Nyanzvi munyaya dzevana dzinoti kusaenda kuchikoro nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus kuri kupawo kuti dambudziko iri rikombe.
Mumwe musikana wechidiki akasiira chikoro panzira ave muform yechipiri ati anoda kungozivikanwa nekuti Amai Shantel audza Studio 7 kuti dai akawana zvekuzvidzivirira pamwe angadai asina kubata pamuviri.
Rimwe sangano riri kushandawo nevasikana vechidiki vari kubata pamuviri vasati vabva zera mumusha weMbare re I am Zimbabwe Trust Mbare , Muzvare Margaret Yalard vaudza Studio 7 kuti dambudziko revana vechidiki vari kubatira pamuviri vasati vabve zera rakakura.
Muzvare Yalard vanoti kunyangwe hazvo pachivanhu nepachrikristu vana vadiki vasiri muwanano vasingabvumirwi bonde, zviripachena kuti vari kungozviita muchivande nekudaro zviri nani kuti vakwanise kuzvidzivirira.
Asi mumwe mubereki ane vanasikana vatatu, Amai Precious Mhere vanogara mumusha weMbare vanoti vanoda kuti mutemo urambe uchidzivirira vana vasati vabvezera kuti vasanopiwa zvekushandisa pabonde.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvehutano, Dr. Ruth Labode, vaudza Studio 7 kuti vachitarisa vana vechidiki varikuita nhumbu pamwe neavo vanozoedza kubvisa zvisiri pamutemo vanokurudzira kuti vana vasati vabva zera vanoenda kumakirinika vachitsvaka nzira dzekuzvidzivirira pabonde vawane rubatsiro uye vati Amai mitemo kusanganisira wePublic Health Act inofanira kuvandudzwa.
Parizvino mutemo wePublic Health Act vana vasati vabve zera ava vanokwanisa kuwaniswa zvekushandisa pabonde izvi kana vaine munhu mukuru chete.
Imwe nyanzvi munyaya dzebudiriro yevana, Amai Chinga Govhati vatsinhira mashoko aya vachiti Zimbabwe inofanirwa kuvandudza mitemo yayo.
Vachipindura mibvunzo mudare reparamende mwedzi wapera, gurukota rezvehutano vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika , VaConstantino Chiwenga vakati hurumende haisi kutambira gwaro rakaitwa nedare reparamende rakakurudzira kuti vana vawaniswe zvekuzvidzivirira pabonde pasina mubereki.
Mutevedzeri waVaChiwenga Dr John Mangwiro vaudza Studio 7 kuti vange vari mumusangano nekudaro vange vasingakwanise kupindura mibvunzo yedu pakutudziro iri kuramba ichiitwa nevamwe iyi.